စားသုံးသူများကိုခြေရာခံရန်စွမ်းရည်ရှိသောစွမ်းဆောင်နိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ချက်များပေးရန် FTC ၏အင်တာနက်ကုမ္ပဏီများအား FTC ၏တောင်းဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအတော်များများရှိပြီးဖြစ်သည်။ သင်စာမျက်နှာ ၁၂၂ မျက်နှာကိုမဖတ်ရပါက သီးသန့်လုံခြုံရေး FTC ကသူတို့တောင်းဆိုနေတဲ့အင်္ဂါရပ်တစ်ခုထဲမှာသဲထဲမှာမျဉ်းတစ်မျိုးမျိုးချနေတယ်လို့သင်ထင်လိမ့်မယ် ခြေရာမခံပါနဲ့.
စားသုံးသူအပြုအမူများကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ကုမ္ပဏီများကခြေရာခံသည့်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးမှာကွန်ရက်စာမျက်နှာနှင့်သင်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့်အခါအချက်အလက်နှင့်အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းသော browser cookies ဖြစ်သည်။ တချို့က cookies တွေကိုဖြစ်ကြသည် ဘေးလူဆိုလိုသည်မှာစားသုံးသူသည်ဆိုဒ်များကို ဖြတ်၍ ခြေရာခံနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ Flash files များမှတဆင့်အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်နည်းလမ်းများလည်းရှိပါသည်။ ၎င်းသည်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ browser ထဲတွင် cookies များကိုရှင်းလင်းသောအခါပုံမှန်အားဖြင့်ဖျက်ပစ်ခြင်းမရှိပါ။
ခြေရာမခံပါနဲ့ စားသုံးသူကိုခြေရာခံခံရခြင်းမှရပ်တန့်ရန်အားပေးသော FTC ကိုအကောင်အထည်ဖော်လိုသော optional feature တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြံဥာဏ်တစ်ခုမှာအချက်အလက်များကိုခြေရာခံအချက်အလက်များဖြင့်ကြော်ငြာထားသည့်အချိန်တွင်သုံးစွဲသူသည်အချက်အလက်ဖမ်းယူခြင်းနှင့်ကြော်ငြာကိုပယ်ဖျက်ခြင်းကိုညွှန်ပြရန်ဖြစ်သည်။ FTC မှနောက်ထပ်အယူအဆတစ်ခုမှာအစားထိုးပေးရန်ဖြစ်သည် အချိန်တန်ပြီ သက်ဆိုင်ရာကြော်ငြာတင်ရန်သုံးစွဲသူ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည့်အချက်အလက်။
FTC သည်ဤအကြံပြုချက်များကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် အကယ်၍ စက်မှုလုပ်ငန်းသည်တစ်ခုခုကိုမတီထွင်ပါက၎င်းတို့သည်ထိုနည်းပညာ၏ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုများကိုလည်းအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်ဟုအရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ အမှန်တရားမှာတာ ၀ န်ရှိသည့်စျေးကွက်များနှင့်အွန်လိုင်းကုမ္ပဏီများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပိုမိုသက်ဆိုင်သောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုရရှိရန်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုနေသည်။ FTC မှဤအချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။
ထိုကဲ့သို့သောယန္တရားတစ်ခုသည်အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူများစွာတန်ဖိုးထားသည့်ကိုယ်ပိုင်ကြော်ငြာများကိုပေးခြင်းဖြင့်အွန်လိုင်းအမူအကျင့်ဆိုင်ရာကြော်ငြာကပေးသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုမထိခိုက်စေသင့်ပါ
Privacy report သည်မည်သည့်ဗဟိုမှတ်ပုံတင်ကိုမဆိုနှင့်ကဲ့သို့ဖော်ပြသည် မလုပ်ပါနှင့် ခေါ်ရန် စာရင်းသည်ယုတ္တိတန်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပါ။ FTC သီးသန့်လုံခြုံရေးအစီရင်ခံစာသည်မေးခွန်းများစွာပေါ်ပေါက်စေသည် -
ဘယ်လိုထိုကဲ့သို့သောယန္တရားသင့်တယ် ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် စားသုံးသူများနှင့်လူသိရှင်ကြား?
ဘယ်လိုထိုကဲ့သို့သောယန္တရားအဖြစ်ဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်ပါတယ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အသုံးဝင်သော စားသုံးသူတွေအတွက်ဖြစ်နိုင်သလား
အဆိုပါဘာတွေလဲ အလားအလာရှိသောကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးခံစားခွင့် ယန္တရားကမ်းလှမ်း၏? ဥပမာမည်မျှစားသုံးသည်
သုံးစွဲသူမည်မျှစားသုံးသူမည်မျှရှိသည်နှင့်ပကတိရာခိုင်နှုန်းပေါ်တွင် မူတည်၍ သုံးစွဲခဲ့သည် opt-out tools များ လောလောဆယ်ထောက်ပံ့နေသလား။
ဖြစ်နိုင်ခြေကဘာလဲ သက်ရောက်မှု အကယ်၍ စားသုံးသူအမြောက်အများကရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ပါက?
တစ် ဦး ၏အယူအဆသငျ့သညျ universal ရွေးချယ်မှုယန္တရား အွန်လိုင်းအမူအကျင့်ဆိုင်ရာကြော်ငြာထက် ကျော်လွန်၍ တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ဥပမာအားဖြင့်မိုဘိုင်း application များအတွက်အပြုအမူဆိုင်ရာကြော်ငြာများကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသလား။
အကယ်၍ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ sector အနေဖြင့်ထိရောက်သောယူနီဖောင်းရွေးချယ်မှုယန္တရားကိုဆန္ဒအလျောက်အကောင်အထည်မဖော်ပါက FTC ကလုပ်သင့်သည် ဥပဒေပြုရန်အကြံပြုပါသည် ထိုကဲ့သို့သောယန္တရားလိုအပ်?
ဒီတော့ ... ဒီအချက်မှာထိတ်လန့်စရာအကြောင်းမရှိ။ ခြေရာမခံပါနဲ့ သေချာတဲ့အရာမဟုတ်ပါ ငါထင်တာကဒါကိုထုထည်ကဘယ်တော့မှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းအစားကျွန်ုပ်၏ခန့်မှန်းချက်သည်အစီရင်ခံစာသည် ပိုမို၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော privacy နှင့် tracking site များသို့ ဦး တည်သွားလိမ့်မည်ဟု (attn: Facebook) ဒါမကောင်းဘူးမဟုတ်လား။ ငါထင်တာတော့တရားဝင်စျေးကွက်သမားအများစုဟာခိုင်မာပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ privacy ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်။
ငါကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကြည့်ရှုလိုသည်မှာ browser များမှအသုံးပြုသူများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ဒေတာများကိုစုဆောင်းနေစဉ်၊ သိုလှောင်ထားသည့်အချက်အလက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောကြော်ငြာများသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲနေသောအကြောင်းအရာများကိုပြသရန်မည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားသောတုံ့ပြန်ချက်များပေးသည့်သစ်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်စာတိုပေးပို့ရေးအသုံးအဆောင်များကိုအသုံးပြုသည်ကိုတွေ့မြင်ရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ စက်မှုလုပ်ငန်းသည်စံချိန်စံညွှန်းအချို့ကိုပေးနိုင်ပါက၎င်းသည်စားသုံးသူများနှင့်စျေးကွက်နှစ်ခုလုံးအတွက်ကြီးမားသောတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်များအတွက်, သွားရောက်ကြည့်ရှု ခြေရာမခံပါနဲ့ ပူးပေါင်းဝက်ဘ်ဆိုက်။